Goa, paradhiso muIndia | Kufamba Nhau
Goa, paradhiso muIndia
Mariela Carril | | India, Chii chekuona
Goa Iyo ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzinopisa mu India. Icho chinangwa chevazhinji vanodzoka vachitsvaga akanaka mabhishi, exoticism, tsika uye kusiyana. Iyi nyika yeIndia iri padyo neGungwa reArabia uye inofarira a mamiriro ekunze anodziya mazhinji egore, kunyangwe iwe uchifanira kutarisisa kunaya uye kupisa kwakanyanya mune mimwe mwedzi.
Nhasi yave nguva yedu yekuenda kuGoa uye tobva taronga rwendo rwedu rwunotevera kuIndia.
Sezvatakataura, inyika yeIndia inogara zvishoma kupfuura zviuru mazana matatu nemazana manomwe emakiromita epasi, iine mahombekombe mazhinji uye munzvimbo dzinopisa padyo neGungwa reArabia. Mazuva anopisa anoitika muna Chivabvu, achiteverwa nemvura yemononono inopfuurira kusvika munaGunyana.
Goa yakakamurwa kuva Maodzanyemba eGoa neSouth Goa y guta rayo guru iguta rePanaji. VaPutukezi vakatora chikamu ichi cheIndia mukutanga kwezana ramakore rechiXNUMX kudzora kutengeserana kwezvinonhuwira, vachikunda maMuslim nevanhu vemuno. A) Hongu, Goa yakava guta guru rePortugal India uye hwaro hwehumambo hwekushanda mudunhu. Silika uye maceramics kubva kuChina, maparera nemakorari kubva kuPersia, marudzi eMalsian aipfuura nepakati peviceroyalty yeGoa ...
Nekuuya kwevaDutch vafambisi vechikepe simba rePutukezi muGoa rakatanga kudzikira. Aya mamiriro akawedzeredzwa nedenda, ndokuzopokana nemadzishe emuno uye pakupedzisira, mushure mekutamisa guta guru kune izvo zvava kunzi Panaji, maBritish akatora Goa pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX. Portugal yakanga isina kwaakarerekera panguva yeWWII saka ngarava zhinji dzeGerman dzakaonekwa pano dzichitsvaga utiziro.
Pakupedzisira India yakawana rusununguko kubva kuGreat Britain mu 1947 y inopinda Portugal yakakumbirwa zviri pamutemo kuti idzokere Goa. Portugal yaisada uye ipapo kuratidzira kwakanangana navo uye mablockades akatanga kuvamanikidza kuti vaende. Zvese zvakapera mune kumwe kurwira muna 1961, maPutukezi akasiya uye Goa yakava imwe yenyika dzeIndia.
Ndataura zvese izvi, ini ndinogara ndichiona zvakakodzera kuti ndizive chimwe chinhu nezvenhoroondo yenharaunda yaunoronga kushanyira, ngatione zvazvinopa vafambi. Chekutanga pane zvese, chii chinouya kuzotarisa muchikamu chino cheIndia: Mahombekombe. Mabhichi ane vanhu vashoma anowanikwa muSouth Goa uye pano akanakisa ndiwo mahombekombe e Arossim uye Utorda, pedyo neguta reMajorda. Mukati meNorth Goa iri Baga, Anjuna naCalangute.
Mumahombekombe ese eGoa unogona kuita mitambo yemvura yakadai se jet ski, paragliding, kudhizaivha, snorkeling kana kunakidzwa nekukwira mabhanana kana shanyira zvinonhuwira, ndosaka maEuropean pakutanga akauya kuIndia. Semuenzaniso, iyo Sahaki Spice Farm kana iyo Parvati Kudyara, yakasarudzika inopisa inopisa mhiripiri muPonda. Kana iwe ukaenda wega, edza kuenda nekukurumidza nekuti mumashure mapoka akarongeka anosvika uye anozadza.
Iwe unogona zvakare kayaking paRwizi Aguada kana rafting paMandovi River kana Valpoi. Nzvimbo inozivikanwa paBaga Beach iSt Anthony's Bar. Kune machira ezuva, matafura ane makenduru, mumhanzi, karaoke uye zvakawanda zvinonakidza. Inotevera musuo ndiyo yekudyira yeBritto, imwe nzvimbo yakakurudzirwa kuenda. Kana husiku hwawa, zvese zvinouya zvichirarama kune vanodzokera kumashure saka gadzirira kusangana.
Panaji, iro guta guru reGoa ndeimwe nzvimbo yausingakwanise kupotsa. Iko kupi iyo Old Goa, inozivikanwa panguva imwechete se Roma kubva kuEstuye. Apa ndipo paunozoona machechi ekare (Basilica yeBom Jesu kana Chechi yeSanta Catarina, hombe uye inoshanyirwa), convents, mamuseum, zvivakwa zvekoloni uye maberere ehunyanzvi. Iwe unogona kufamba kuburikidza neLatin Quarter, iine dzimba dzekare dzechiPutukezi-dzimba, rakanakira kutumira mifananidzo pa Instagram. Chokwadi, Old Goa Inhaka Yenyika.
Mahombekombe uye nhoroondo, asiwo mhuka dzesango. Unogona kushanyira iyo Mollem National Park kusangana nemapanther, mabheya nemhembwe, kana iyo Bhagwan Mahavir Nzvimbo Yemusango Yemusango. Kune anopfuura mazana maviri emarudzi eshiri uye saiti iri pazasi pemakomo eWestern Ghats, uye inogona kushanyirwa mazuva ese kubva 200:8 am kusvika 30:5 pm. Iwewo unogona kudaro ona dolphins kana iwe ukatora chikepe kuenda kuGreat Island kana mumvura dzeCandolim, Calangute kana Sinquerim. Iyo yakanaka cruise agency paJohn's Dolphin Tour, ine yavo "hapana ma dolphin, hapana mubhadharo" uzivi.
Mabhichi, nhoroondo, mhuka dzesango uye mhizha. Kupi? Mu Ingo Yakajairika Musika. Kwakatangira uyu musika zvine chekuita nekuuya kweGerman anonzi Indo uyo akaronga kuvhura misika yeflea, mhando yemugovera weMugovera muArpora. Iyo inogara mwedzi mitanhatu pagore, munguva yechando, uye iwe unowana zvishoma zvezvose pakati pe sweatshirt, hippie mitsipa, midziyo yekicheni uye macondiments, nezvimwe. Iko kune mupenyu DJ uye kana iwe usingade vanhu vazhinji unogona kuenda husiku.
Goa iri makiromita mazana mashanu nemakumi mashanu kubva kuBombai, angangoita maawa gumi nerimwe mumugwagwa uye awa rimwe chete nendege. Iri izano rakanaka kutanga naPanjim uye kugara mudunhu renhoroondo izano rakanaka pano. Kana iwe uine mari kune anonakidza emahotera emahotera sezvavanoshanda mudzimba dzekare dzekoloni. Kana iwe uchida zano rekugara pamhenderekedzo, zvese kuchamhembe nekumaodzanyemba kune pekugara kwemarudzi ese. Kana iwe uchida Airbnb pane zvakare kupihwa pano.
Iyo yakanaka ndeye kushandisa anopfuura mazuva gumi uchishanya Goa, kunakidzwa, kuva nenguva, kwete kumhanya. Iwe unobvarura mudhudhudhu uye iwe une kuzvitonga kuzhinji zvakare, pamusoro pekuve iri yakanyanya kunaka sarudzo yekuziva chaizvo zvese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Chii chekuona » Goa, paradhiso muIndia
Chii chekuona mudunhu reMontmartre muParis
Plovdiv, chii chekuona muguta rino reBulgaria